ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသူနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း အပိုင်း ၁ !!! - JAPO Japanese News
လာ 08 Jun 2020, 15:20 ညနေ
ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့ နေ့လည်စာစားချိန်မှာ ဂျပန်မှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ Su ကိုတွေ့ဖို့ Okayama တက္ကသိုလ်က ကဖေးကို သွားခဲ့ပါတယ်။
သူမက Okayama တက္ကသိုလ်ဘွဲ့လွန်ကျောင်းတွင် အိုင်တီပညာကိုလေ့လာနေပြီး၊ ပြည်ပတွင်ပညာသင်ယူနေတာ နှစ်နှစ်ခွဲကြာပြီဖြစ်ပါတယ်။
Su သည် သန်လျင်နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့်
ဂျပန်စက်ရုပ်နှင့် IOT လေ့လာရန် ဂျပန် ပြည်ပနိုင်ငံမှာ လေ့လာဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဘွဲ့ရပြီးနောက် သူမဟာ ဂျပန်တွင်ဆက်လက်နေထိုင်ပြီး EC ရဲ့ အဓိက ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုပြုလုပ်တဲ့ နိုင်ငံခြားနှင့်ဆက်နွယ်သော Amazon Web Services(AWS) တွင် အလုပ်လုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ Su ထံမှ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများနှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ အတွက် အလုပ်ရှာဖွေခြင်းနည်းလမ်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီးတော့ မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
သူမသည် ဘွဲ့လွန်ပထမနှစ်ရဲ့ စက်တင်ဘာခန့်မှစတင်ကာ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက် အလုပ်ရှာဖွေတဲ့ သတင်းအချက်အလက်များကို တက္ကသိုလ်ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေ စတင်စုဆောင်းခဲ့ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာလ မှစတင်၍ နိုင်ငံခြားသားများအတွက် အလုပ်အကိုင်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ရှင်းလင်းချက်များနှင့် လမ်းညွှန်မှုများကို သိရှိနိုင်ဖို့ တိုကျိုသို့ မကြာခဏလာရောက် လည်ပတ်ခဲ့တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
အဲဒီကနေပြီးတော့မှ သူမ သွားချင်တဲ့ ကုမ္ပဏီများနှင့်ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များကို စုဆောင်းပြီး အလုပ်ရှာခြင်းအတွက် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။လျှောက်လွှာအတွက် ဂျပန်စာဖြင့် Entry စာရွက် (ES) ကို ရေးရန်လိုအပ်သောကြောင့် သူမက တက္ကသိုလ်ရဲ့ အလုပ်ရှာဖွေသည့် စင်တာသို့အမြဲသွားပြီး ဂျပန်စာကို လက်ရေးဖြင့် လေ့ကျင့်ပြီး စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။
ES မှာရှိတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကို စာလုံးရေ ၆၀၀ မှ ၁၀၀၀ အထိ မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်လိုအပ်သောကြောင့်၊
များစွာသောကုမ္ပဏီတွေကို လျှောက်ထားသူများအတွက် အလျင်စလို မဖြစ်စေရန်နဲ့ ၎င်းကို စနစ်တကျ ချရေးရန်အရေးကြီးပါတယ်။
(သူမ က ကုမ္ပဏီ ၇ ခုကို လျှောက်ထားတာကြောင့် ဒါဟာခက်ခဲတယ်လို့ထင်ပါတယ်. . . )
အချို့သော ကုမ္ပဏီတွေကတော့ ၀က်ဘ် စစ်ဆေးမှုကို ဖြေဆိုရန် လိုအပ်ပြီး ၊ ၄င်းတို့ကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ရိုးရှင်းတဲ့ သင်္ချာနှင့် ဘဝအတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံထားပါတယ်။
သူမကတော့ SPI (ဂျပန်ကျောင်းသားများ လေ့လာသင်ယူသော ၀က်ဘ်စစ်ဆေးမှု) ကို အသုံးပြု၍ သင်္ချာပညာကိုလေ့လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ES ထုတ်ပေးပြီး နောက် အင်တာဗျူးဖြေရပါတယ်။ကုမ္ပဏီပေါ် မူတည်၍ ကွာခြားမှုအနည်းငယ်ရှိပြီး Su ကတော့ အင်တာဗျူး ၅ ခု ကို အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
Corona ကြောင့် လူတွေ့အင်တာဗျူး မဟုတ်ပဲ အွန်လိုင်းအင်တာဗျူး လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှု ၅ ခုတွင် ၃ ခုမှာဂျပန်ဘာသာဖြစ်ပြီး ၂ ခုမှာ အင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်ပါတယ်။
(ဂျပန်ကုမ္ပဏီများအတွက် အင်တာဗျူးအားလုံးကို ဂျပန်ဘာသာဖြင့်သာလည်း ‌‌‌ဖြေဆိုလို့ရပါတယ်။ )အင်တာဗျူးတွင် “ မင်းဘာကြောင့် ငါတို့ကုမ္ပဏီအတွက် အလုပ်လုပ်ချင်ရတာလဲ ? ” ဆိုတဲ့ ဘုံ မေးခွန်းအပြင် နိုင်ငံခြားမှာလေ့လာမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။
ဥပမာ – နိုင်ငံခြားမှာလေ့လာတုန်းက ဘာတွေလေ့လာခဲ့တာလဲ။ ဂျပန်နှင့်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုကွာခြားမှုရှိပါသလား။ အစရှိတဲ့ မေးခွန်းများကို အဓိကမေးပါတယ်။နောက်ဆုံးအင်တာဗျူးမှာတော့ အထက်လူကြီးနဲ့ တစ်ဦးချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခံရပြီး
သူမက အထက်လူကြီးအား သူမ မေးလိုသော မေးခွန်းများကို မေးလို့ရနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သူမ က “ ဂျပန်မှာအလုပ်လုပ်ပြီး အတွေ့အကြုံတွေရပြီးတဲ့နောက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပြီး ကိုယ့်တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အထောက်အကူပြုချင်တယ်” ဟု ပြင်းပြတဲ့ ခံစားချက်ရှိကြောင်း ‌ဖြေကြားခဲ့ပြီး ဒီအချက်ကြောင့် အင်တာဗျူးအောင်ခဲ့တာလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒီနောက် April လလယ်လောက် မှာ အလုပ်လက်ခံမှု အကြောင်းကြားစာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
(အခြေခံအားဖြင့် ဂျပန်ကုမ္ပဏီများထက် နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များတွင် အခြေစိုက်သည့် နိုင်ငံခြားနှင့်ဆက်နွယ်နေသော ကုမ္ပဏီများသည် ရွေးချယ်မှုများကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ )
စက်တင်ဘာလတွင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ပြီး ခြောက်လခန့်အကြာမှာ သူမ အလုပ်လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။
တချို့လူတွေအတွက်တော့ တစ်နှစ်နီးပါး ကြာမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အကယ်၍ သင်လည်း ဂျပန်မှာအလုပ်တစ်ခုရဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်၊
ကျေးဇူးပြုပြီး Su ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြောပြထားတဲ့အတိုင်း လေ့လာကြည့်ပါနော် !
နောက်တစ်ခေါက်မှာတော့ Su ရဲ့ ဂျပန်တက္ကသိုလ်ဘဝအကြောင်းကို မျှဝေပေးသွားပါမယ်နော်။
အကယ်၍ သင်လည်း ဂျပန်မှာ ကျောင်းတက်ဖို့အတွက် စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါ site ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်။
Facebook page : https://www.facebook.com/StudyinJapanOfficeYangon/